Imbonakalo yolwandle ye-Splendid Eco-Bungalow
Kwindawo epholileyo, yiza uphumle kwi-bungalow Umgangatho oPhezulu wokusiNgqongileyo ogcinwe ehlathini, umbono wolwandle 180 °. I-70 m2 ixhotyiswe ngokupheleleyo, ingqiqo yezinto eziphilayo, ikhitshi, ibhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela kunye ne-WC eyahlukileyo (izindlu zangasese zomile), i-terrace enkulu. Imizuzu engama-30 ukusuka eNoumea, kwindawo ezolileyo yesithili, kwisango lokuya kuMzantsi oMkhulu, ulwandle imizuzu emi-2. Ubonelelo lweendawo ezi-2 ze-kayak, i-yoga mats, i-topo yokuhamba ukusuka kwi-bungalow.
I-Superb bungalow HQE (Umgangatho ophakamileyo wokusingqongileyo) emthini kubantu aba-2 ababandakanya igumbi lokuhlala elikhulu elinokuvulwa okuninzi ngaphandle. Kuhle kakhulu, umoya wendalo, ihlathi elihlala likhona, iintaka ezininzi. Ithafa enkulu kumacala ama-3 ukonwabela ipanorama entle yePlum Bay ukusuka ekuphumeni kwelanga ukuya ekutshoneni kwelanga. Ikhitshi lixhotyiswe nge-induction cooker, i-microwave, iketile, itoaster, ifriji, izitya kunye neziqholo ezifumanekayo. HiFi ngejekhi encedisayo. I-intanethi iyafikeleleka kwindawo yokubhukuda. Iilinen zibonelela. Ibhedi ephindwe kabini enenethi yeengcongconi. Ikhabhathi. Igumbi lokuhlambela elizimeleyo: izindlu zangasese ezomileyo, ishawa kunye nebhakethi. Ithuba lokusebenzisa ishawa kunye nendlu yangasese "i-classic" yendawo ye-pool. Ubonelelo lwemfuneko yokuhlenga-hlengisa inkunkuma. I-bungalow kumandla alungileyo enkosi kwiipaneli zelanga.
Indawo yokuhlala phakathi kolwandle kunye nentaba kunye nolwandle, ukubhukuda, i-coral reef, umzila wokuhamba kunye neendawo zexesha leenqanawa.
Yeyona ngingqi yokuhlala yokugqibela phambi koMzantsi Omkhulu kunye neendawo zayo zomhlaba obomvu.
Umlambo omhle wePirogues kwi-5 min (ukubhukuda emlanjeni kunokwenzeka).
Ivenkile yokutya kwi-5 min, iziko lezonyango (ugqirha, wamazinyo, i-osteopath, umongikazi) kunye nekhemisi kwi-5 min. I-Supermarket 10 min.
Sinabo abahambi ukubonelela ngeengcebiso kunye noncedo ngexesha lokuhlala kwabo e-NC kwaye babelane ngolwazi lwethu oluninzi lommandla.